Nahoana no niala Ambatovy? | Hevitra MPANOHARIANA |
2012-08-29 @ 15:55 in Ankapobeny
Fanamarihana eto am-boalohany. Ny zavatra soratako etoana dia hevitro samirery, tsy misy hafa nanolo-tsaina na nanery hanoratra izao ary tsy misy olona na fikambanana na rafitra hanakana ahy koa amin'ny fanoratana azy ity ihany koa.
Eritreritra nandeha noho ny zavatra novakiana sy ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Maro ireo lohahevitra tiana horesahina saingy misy sampona hatrany fa ity kosa karazany antsoina hoe maika ihany. Misy fandraisana an-tanana na "initiative" mety ho voasakana manko ka malahelo ihany ny tena raha tsy tontosa tokoa ilay izy.
Tsy dia maharaka loatra aho hoe iza sy iza avy no mpanohana ny TEDxAntananarivo, fa ny hany fantatro dia toerana telo no azo ividianana ny tapakila ho amin'io hetsika io hihainoana hevi-baovao mendrika hohenoina ary mety hitondra ho amin'ny fampandrosoana: Chill'Out Ambondrona, Urban Café Antsahabe ary ny Outcool Ampasamadinika. Hetsika izay kasaina hotontosaina amin'ny Asabotsy 1 septambra 2012 manomboka amin'ny roa ora tolakandro. TED fanafohezana ny hoe Technology, Entertainment, Design izay manana ny tarigetran'ny fanapariahana ny «Ideas worth spreading». Manana ny mpikarakara izany ny eto Antananarivo ka mitondra ny anarana TEDxAntananarivo saingy azo tadiavina amin'ny tenifototra #TEDxTNR ihany koa.
Amin'ny ankapobeny, ny tsy miankina izay tena kitro ifaharan'ny fampandrosoana no mandray an-tanana amin'ny hetsika sahala amin'itony ary ny tsy miankina ihany koa no antenaina ho mpanohana azy itony. Amin'ny hetsika nomanina ho amin'ny Asabotsy izao dia ny orinasan'Ambatovy no mpanohana iray goavana noheverina hisahanana ny fampitaovana sy ny kojakoja hafa. Nitsoaka andaharana tamin'ny fotoana farany anefa ity orinasa iray ity ka nahasanganehana ireo mpikarakara. Tsy azony loatra hoe fa naninona no niala tampoka ity orinasa goavana iray ity? Vokatr'izany: eo am-pitadiavana orinasa na fikambanana na olona hafa ho mpanohana io hetsika io indray ry zareo mpikarakara. Manainga antsika etoana mba hierirteritra ny amin'izany.
Izay soratana manaraka kosa dia tombatombana ihany, tsy voatery ho marina ary tsy voatery ho diso ihany koa. Izay novakiana tany amin'ny gazety tany sy tany amin'ny famoaham-baovao hafa koa no nanaovana tsoa-kevitra sy tiako ampitaina. Tsy mahalala ny antony nihemoran'Ambatovy isika rehetra fa karohina kosa ilay izy. Tsy voatery hilaza ny antony ny Sherrit fa azy izany, saika hanohana izy no mety ho tojo fahasahiranana tampoka dia naleony aloha mandamina ny ao an-tokantranony. Tsy misy manery antsika noho izany hino izay soratako. Averina hatrany izany hialana amin'ny filazana hoe: "Dia tena izany mihitsy HONO". Tsia, tsy afaka ny hitompo teny velively aho fa mba mitady ny antony ihany koa.
Resaka ambany latabatra saingy nivoaka tamin'ny gazety iray, andro vitsivitsy lasa izay, ny filazana fa nisy tompon'andraikitra ambony nitaky tamin'Ambatovy handoa vola 800 tapitrisa dolara, hatreo tsy maninona loatra aloha, fa ny vola dia arotsaka amin'ny kaontin'olo-tsotra valo, izany hoe androtsahana zato tapitrisa dolara avy, fa tsy amin'ny kaontin'ny fanjakana. Sahiran-kevitra hoe ny tompon'andraikitra, ny tale jeneraly, hono, nanaiky ny handoa ny vola mba hahafahana miasa fa nandà avokoa kosa ny tale rehetra hafa teo ambany fitantanany. Tsy nisy noho izany ilay fandoavam-bola tany amin'ireo kaontin'olo-tsotra any amin'ny banky... Hatreo no voalaza. Tena fomba fiasa-na Mafia izany hoy ny eritreritro...
Vao nivoaka tamin'ny gazety indray fa tsy nomena fahazoan-dalana hiasa i Ambatovy. Izay izany no tohin'ny raharaha! Fomba ahoana moa no haneken'ny olona kosa hoe kaontin'olo-tsotra any amin'ny banky no handrotsahana vola? setriny: tsy nahazo ny fahazoan-dalana hiasa Ambatovy. Tratran'ny kenda roroka noho izany ilay orinasa, voatery nitsoaka an-daharana tamin'ny fanohanana hetsika, dia eto isika amin'izao fotoana izao. Marihana fa tombatombana daholo ireo fa izay tena iharany ihany no mahalala, tsy voatery hilaza ny antony nialany anefa Ambatovy fa mba hevitra fotsiny iny ahy. Anjaranao ny mino na tsia...
29 aogositra 2012